Netflix na-achịkwa ndepụta nke ihe ngosi 10 kachasị ewu ewu n'izu a - BGR - TELES RELAY
Netflix dị elu gosipụtara ihe ngosi iri kachasị ama n'izu a
Ekwesịrị m ikwenye, atụghị m anya ịnụ ụtọ ihe ngosi Netflix ọhụrụ ahụ Locke & Key ka m. Tralọ ụgbọ ala ahụ dị anya nke ukwuu… kedu ka m ga-esi tinye ya omume ọma?… CWISH. Onweghị ihe dị njọ na CW ma ọ bụrụ na ị banye n'ụdị ihe ahụ. Mana ọ bụrụgodi na ị na-elele ihe ngosi CW ole na ole, ị ga-ekwenye na uru nke mmepụta ahụ, nsonaazụ pụrụ iche, ihe odide na igwu egwu abụghị n'ezie ihe netwọk ndị ọzọ na-eme. Ekpebiri m inye ihe Locke & Key Otu gbagburu, aghọọla m obi ụtọ na m mere ya. Ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu, naanị ihe ya na ihe CW gosipụtara bụ eziokwu bụ na etinyere ya na mpaghara YA. N'ezie, nke a abụghịcha eziokwu. Onwere agwa nke ihe omume ya adabaghi ​​na ndi ozo (Dodge, maka ndi huru ihe ngosi a) o dikwa egwu. Nwunye m kwuru na ọ kacha mma: ọ dị ka ọ na-egwu egwu na CW ihe nkiri na onye ọ bụla nọ na Netflix. Ọ naghị adọpụ uche nke ọma imebi usoro ndị ọzọ, ma enwere m olile anya na ha dee ya obere na oge nke abụọ. Ana m akwado ya nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ngosi binge ọhụrụ.
N’ezie, abughi m onye ka m ji erite uru Locke & Key. N’ezie, ihe ngosi ohuru nke ihe ngosi otutu ama ama na TV na nkwuputa na-egosi na otutu ndi mmadu na - ele usoro Netflix ohuru karia ihe ngosi ndi ozo ugbu a.
Ndị okike nke TV Oge ngwa maka iOS na gam akporo na-ebipụta ndepụta ọhụụ kwa izu nke na-egosi ọkwa kachasị mma ndị mmadụ na-ele n'oge ahụ. Ha na-ekpebi usoro n'usoro site na ịnara data nke ndebiri site na nde mmadụ ndị na-eji TV Oge ngwa iji lelee ihe ngosi dị iche iche ha na-ekiri. Onye ọ bụla debara aha ya ma ọ dịkarịa ala ihe omume anọ na mmemme na ụbọchị, a na-ewere onye na-ekiri ihe na-emebiga ihe ókè.
Ndepụta TV Oge ezughị oke, n'ezie, mana ha na-eji data sitere na ọtụtụ ndị ọrụ. Maka nke a, ndepụta ndị a bụ ezigbo ihe maka ihe ndị ewu ewu taa. Ma dị ka data kachasị dị ugbu a, ọ nweghị mmemme ọzọ na telivishọn ma ọ bụ netwọ nkwanye ugwu ama dị ka Locke & Key.
Isi ihe oyiyi: Oge TV
Netflix yiri ka ọ na-eme ọtụtụ ngosipụta na listi ndị a, nke ahụ na-emekwa ọtụtụ echiche na-atụle ihe niile mbụ gosiri na ọ na-ewepụta kwa ọnwa. Na Machị naanị, Netflix weputara ndi mbu ohuru 55. Izu a, Netflix nwere usoro izizi na ebe isii dị iche iche na 10. Mgbe emesịrị Locke & Key ke akpa ebebe Mmụta Mmekọahụ na # 2 na Ụmụaka Cable ka 3. Emepụtara oge ọhụụ maka ihe ngosi abụọ a n'oge na-adịbeghị anya, yabụ ọ bụghị ihe ijuanya ịhụ ka ha nọ n'elu ndepụta ahụ. Ihe ngosi Netflix ndi ozo gosiputara n’izu a gụnyere Njem egwu dị egwu nke Sabrina na 6, ị na Nke 8, na BoJack Horseman n’elekere 9 nke ụtụtụ. Nke a bụ ndepụta zuru ezu:
Njem egwu dị egwu nke Sabrina
Ebe ziri ezi
Switzerland: Switzerland, ma ọ bụ ihe mgbochi nke ịnọpụ iche
Mgbe m nwesịrị onye ọhụụ na-ahụ maka ihe nkiri 4KQ dị egwu, enweghị m ike ịzụta TV nkịtị